नेपाली बजारमा सुनको भाउ उकालो लाग्दै : कति छ त तोलाको - Eall Nepal
फेरि बढ्यो सुनको भाउ, तोलामा १ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको भाउ काठमाडौँ, २४ जेठ । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा १ सय रुपैयाँले बढेको छ । बुधबार ५८ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बिहीबार ५८ हजार २०० पुगेको हो ।
त्यस्तै, तेजावी सुन बुधबार ५७ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।यता, चाँदी प्रतितोला ७७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ५ रुपैयाँ बढेको हो ।- Dainik Nepal
र यो पनि पढ्नुसः समयमै काम नसक्ने सुनसरीका दुई दर्जन ठेकेदार कारबाहीको सूचीमा इनरुवा । समयमा काम नसक्ने सुनसरीका दुई दर्जन बढी ठेकेदार कारबाहीकाे सूचीमा परेका छन् । निर्माण सम्झौता अनुसार काम नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको सूचि सुनसरी प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले ठेकेदारहरुको विवरण संकलन गरी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीका अनुसार निर्माण व्यवसायी र निर्माण कम्पनीको कार्य मूल्याङकनका आधारमा सूची तयार पारी गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।
कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरुलाई गृहको आदेशमा प्रहरीले जुनै बेला समेत पक्राउ गर्न सक्ने सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ । सुनसरीबाट कार्वाहीको सिफारिसमा परेका निर्माण कम्पनीहरुमा रमण कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि भूमि कन्ट्रक्सनका संचालक कृष्ण बोहरालाई पक्राउ गर्न प्रशासनले प्रहरीलाई आदेश समेत दिइसकेको छ ।
रौता आरके जेभी, एके एण्ड गान्वा, कावा निर्माण सेवा, संजिवनी एचएम विल्डर्स, झोपु निर्माण, मैनबत्ति इण्ड्रसट्रिज प्रालि, सपना पाण्डेश्कर श्याम जेभी, भूमि ओम पञ्चकन्या, साह निर्माण सेवा, निशान श्याम जेभी, जयबाबा विटी सराजुद्धिन, टौदह, एचएम विल्डर्स लगायतका निर्माण कम्पनी र निर्माण व्यवसायी सुनसरीबाट कारबाहीको सूचीमा परेका छन् ।
अन्य केही निर्माण कम्पनी र निर्माण व्यवसायीको नाम भने गोप्य राखी कार्वाहीको सिफारिस गरिएको सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ । source: News 24 Nepal TV
स्त्रिहरुले कसरी हस्तमैथुन गर्छन ? के हस्तमैथुन गर्दा चरम सन्तुष्टी नै प्राप्त हुन्छ ? यस्ता छन जिज्ञासा र सामाधान
तपाईका लागि यस्तो छ २०७५ साल जेष्ठ २५ गते शुक्रबार का लागि राशीफल –